DỊ KA EDERE EDEREDE EDEREDE NA FOTO A - OKWU - 2019
Tinye ederede n'elu ihe oyiyi na Microsoft Word
Na mgbakwunye na ọrụ na ederede, MS Word na-enyekwa gị ohere ịrụ ọrụ na faịlụ ndị nwere ike ịgbanwe n'ime ya (ọ bụ ezie na ọ dịkarịa ala). Ya mere, ihe oyiyi a na-agbakwụnye na akwụkwọ mkpa ka a bịanye aka ma ọ bụ gbakwunye ya n'ụzọ ụfọdụ, na nke a ghaghị ime n'ụzọ dị otú ahụ na ederede ahụ dị n'elu oyiyi ahụ. Ọ bụ maka otu esi etinye ihe ederede n'elu onyinyo ahụ na Okwu, anyị ga-akọwa n'okpuru ebe a.
E nwere ụzọ abụọ ị nwere ike isi kpuchie ederede n'elu foto - iji ụdị WordArt na ịgbakwunye igbe ederede. N'okwu mbụ, akwụkwọ ahụ ga - abụ ihe mara mma, ma ọ bụ ihe ngosi, na nke abụọ - ị nwere ikike ịhọrọ fon, dị ka ederede na nhazi.
Na-agbakwunye mkpụrụ edemede WordArt n'elu
1. Mepee taabụ "Tinye" na otu "Ederede" pịa ihe "WordArt".
2. Site na gbasaa menu, họta ụzọ kwesịrị ekwesị maka edemede ahụ.
3. Mgbe ị pịa na ụdị ahọrọ, a ga-atụkwasị ya na peeji nke akwụkwọ. Tinye akara ngosi achọrọ.
Rịba ama: Mgbe ị gbakwunye okwu labe WordArt, taabụ ga-apụta "Hazie"nke ị nwere ike igosi ntọala ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịgbanwe nhaala aha ahụ site na ịbịpụta n'ọhịa ebe ọ dị.
4. Tinye ihe oyiyi na akwụkwọ ahụ na-eji ntụziaka dị n'okpuru ebe a.
5. Bugharịa akara labelArt n'elu oyiyi ahụ dị ka ị chọrọ ya. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike idozi ọnọdụ nke ederede site na iji ntuziaka anyị.
Ihe omumu: Otu esi edeghari ederede n'ime Okwu
6. Emere, ị na-etinye akara ụdị WordArt n'elu oyiyi ahụ.
Na-agbakwụnye ihe ederede ederede
1. Mepee taabụ "Tinye" na ngalaba "Ogige ederede" họrọ ihe "Ihe dị mfe".
2. Tinye ederede achọrọ na igbe ederede nke na-egosi. Kwado nhazi ubi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
3. Na taabụ "Hazie"nke gosiputara mgbe agbakwunye ubi ederede, mee ntọala dị mkpa. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbanwe ọdịdị ederede ahụ n'ọhịa n'ụzọ dị mma (taabụ "Home"otu "Font").
Ihe omumu: Esi edeghari ederede na Okwu
4. Tinye ihe oyiyi na akwụkwọ ahụ.
5. Bugharịa ederede na foto ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dozie ọnọdụ nke ihe ndị ahụ site na iji ngwaọrụ ndị dị na ya "Paragraf" (taabụ "Home").
Ntuziaka: Ọ bụrụ na ederede ederede dị ka ihe ederede na-acha ọcha, si otú ahụ na-ekpuchi onyinyo ahụ, jiri aka bọtịnụ aka nri na-ede ya n'akụkụ ya na ngalaba "Mejupụta" họrọ ihe "Agaghị Ejupụta".
Na-agbakwụnye captions na foto a
Na mgbakwunye na mkpuchi nke ihe odide n'elu onyinyo ahụ, ị ​​nwekwara ike ịgbakwunye ya aha (aha).
1. Tinye ihe oyiyi na ihe ederede na nri pịa ya.
2. Họrọ ihe "Tinye isiokwu".
3. Na windo nke meghere, tinye ederede dị mkpa mgbe okwu ahụ gasịrị "Ọgụgụ 1" (anọgide na-agbanweghi agbanwe na windo a). Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, họrọ ọnọdụ nke ihe ntinye (n'elu ma ọ bụ n'okpuru onyinyo ahụ) site na ịgbasa menu nke mpaghara ahụ kwekọrọ. Pịa bọtịnụ ahụ "OK".
4. A ga-agbakwunye ihe odide ahụ na faịlụ dị egwu, ihe odide ahụ "Ọgụgụ 1" nwere ike ihichapụ, na-ahapụ naanị ederede ị banyere.
Nke a niile, ugbu a, ị maara otú e si edebanye aha na foto dị na Okwu ahụ, yana esi abanye foto na usoro a. Anyị na-achọ ka ị nwee ọganihu n'inwekwu ọganihu nke ụlọ ọrụ a.